En vente actuellement 29/10/2018
Mampihena tena amin’ny dite…izao no atao!
Raha te hanary lanja dia tsy maintsy hafainganina ny fiasan’ny metabolisma. Rehefa miasa haingana ny metabolisma dia sady mihatsara ny fandevonan-kanina no betsaka ny kaloria very. Ireto misy karazana dite roa manetsika ny metabolisma. Hanampy anao hihena sy ho salama tsara izy ireo.
Ny hamantarana fa tsy ampy rano ny zazakely…
Mety hahafaty ny zazakely ny tsy fahampian-drano. Ny hafanana dia isan’ireo mety hitarika izany. Ilaina araka izany ny manome rano azy matetika. Azo atao koa ny manamboatra ny sakafo haniny. Torohevitra mahakasika izany no omenay anao.
Tsy miha-antitra mihitsy ry JLo, Jessica Alba, Usher…
Mandeha ny taona, nefa tsy hita soritra eny amin’ny endrik’ireto olo-malaza ireto izany. Toa tsy miha-antitra mihitsy mantsy izy ireo.
Mety ho sambatra ny olona tsy manana olon-tiana !
Toy ny zavatra rehetra, izay misy lafy tsarany sy lafy ratsiny, dia ahazoana tombony ihany koa ny tsy fananana olon-tiana.
Tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo :
Ny fitarihan-drano no vahaolana, efa misy ny tetikasa ho amin’izany Amin’izao fotoana dia lasa isan-taona no misy kere any amin’iny tapany atsimon’ny Nosy iny, noho ny fiovan’ny toetr’andro. Miala 3km ny tanàna ny mponina, raha akaiky indrindra, vao mahazo rano…
Ny atao mba handaitra tsara ny maska
Be dia be ny karazana maska vita amin’ny akora natoraly sy namboarina ao an-trano saingy maro be koa ireo vehivavy no mitaraina fa tsy mandaitra akory izany.
Etazonia : mpitsoa-ponenana an’aliny, hosakanana tsy hiditra any an-toerana
Miaramila an-jatony mahery no nahetsiky ny governemanta ao Etazonia mba hanakana ireo mpitsoa-mponenana efa an'alina avy any Honduras mikasa ny hiditra any an-toerana.
Zazakely vao teraka maty noho ny oroka
Vao teraka 8 andro i Aliza, zanaky ny vehivavy amerikanina 19 taona iray dia maty.
Tsy eken’ny mpitsabo frantsay ny hanomezana alalana ny farmasianina hamoaka taratasim-panafody
Vao eo am-pandinihina ny volavolan-dalàna mahakasika ny famatsiana ara-bola ireo fiahiana sosialy ao Frantsa ny solombavam-bahoaka any an-toerana, ny faran’ny herinandro teo.
Tsy voaray ho polisy ireo indonezianina efa tsy virijiny intsony
Miavaka dia miavaka ny fepetra takiana amin’ireo polisy vavy any Indonezia. Raha hamafisan-tsaina sy fahavononana mantsy no takiana amin’ireo vehivavy hanao polisy amin’ny firenena hafa dia ny hatsaran-tarehy sy fahadiovana kosa no andrasana amin’ireo vehivavy indonezianina.
Ny tsara ho fantatra, rehefa hamorona anaran-janaka …
Ny anarana no hamaritana voalohany ny maha- olona. Teboka iray hitarafana ny toetran’ny olona tsirairay ihany koa ny anarana. Ny ray aman-dreny misafdy anaran-janaka araka izany dia mila mandinika tsara satria iankinan’ny fiainan-janany iray manontolo io anarana omeny io.
Vehivavy 25 taona aho, miaraka amin’ny tovolahy 21 taona.
Mifankatia izahay saingy niteny tamiko izy fa tsy afaka ny hanambady ahy hono, noho io elanelan-taonanay io.
Lasopy amin’ny patsa be sy voanio
Akora ilaina · Fraomazy malemy singany 3 · Patsa be 250g · Tongolo be 2 · Poavrao mena 1 · Tongolo gasy hasiny 3 · Menaka oliva 2 sf · Voatabia 2 · Vary 90g · Sakay voatoto ¼ sk · Voatabia amin’ny boaty ½ sk · Sira 1 sk · Dipoavatra ¼ sk · Ranom-boasarimakirana 1 · Persily 2 taho · Rano 800ml